Madaxweyne Xaaf oo Magacaabaya Gudiga Doorashooyinka Galmudug iyo faramaajo oo ku sii jeeda halkaas | Somalisan.com
Home Afsomali Madaxweyne Xaaf oo Magacaabaya Gudiga Doorashooyinka Galmudug iyo faramaajo oo ku sii...
Madaxweyne Xaaf oo Magacaabaya Gudiga Doorashooyinka Galmudug iyo faramaajo oo ku sii jeeda halkaas
Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa la filayaa in uu gaaro magaalada Dhuusomareeb ee caasimada maamulka Galmudug si uu usoo xiro shirkii dib u heshiisiinta ee halkaasi ka socday.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya u tagayo Dhuusomareeb si uu usoo xiro shirkii Dib u heshiisiinta beelaha dega Galmudug maalmahan uga socday magaalada Dhuusomareeb.
Qaban qaabada safarka Madaxweynaha Soomaaliya ku tagayo magaalada Dhuusomareeb ayaa si weyn looga dareemayaa xarunta Madaxtooyada Soomaaliya, waxaana saacadaha soo socda la filayaa in wafdi horu dhac u ah Farmaajo gaaraan Dhuusomareen .
Madaxweyne Farmaajo ayaana la kulmi doono Odayaasha iyo Ergooyinka ka qeyb galaya shirka dib u heshiisiinta si uu u dhageesto cabashooyinka ay qabaan ugana hadlo helitaanka Galmudug loo dhan yahay.
Shirka Dib u heshiisiinta ayaa marka uu si rasmi ah usoo xiro Madaxweynaha Soomaaliya ayaa la filayaa in la guda galo qeybaha kale ee dhismaha maamulka Galmudug sida Baarlamaanka iyo Doorashooyinka Gudoonka Baarlamaanka iyo Madxaweynaha.
Previous articleIdaacaduhu Waa u muhiim bulshada sababa jira owgeed
Next articleSalaada – Fariin qof kasta oo Muslim ah ku socota
Full VIDEO president isaias Afwerki of Eritrea Somalia does not exist any more